Madaxweyne Siilaanyo oo cafis u fidiyay wariye Cabdi Maalik Coldoon
Sagal Radio Services • News Report • May 25, 2017
Waxaa manta xabsi ku yaala magalda Hargeysa laga sii daayay wariye Coldoon oo in muda ah u xirnaa Xukuumada Soomaaliland.
Soomaaliland oo ka digtay mooshinka ka dhanka ah saldhiga Imaaraadka ee Bebera
Maamulka Soomaaliland ayaa faragalin toos ah ku tilmaamay mooshinka ka dhanka ah saldhiga military ee Imaaraadku qorsheynayo in uu ka sameysto Berbera oo ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliland oo isku shaandheyn ku sameeyay Golihiisa Wasiirada
Sagal Radio Services • News Report • December 4, 2016
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa isku shaandheyn ku sameeyay Golihiisa Wasiirada, kaasoo isugu jira, xil ka qaadis, isku bedel iyo magacaabis xilal cusub.
Guddoomiye Cirro oo sheegay in loo diiday inuu xabsiga ku booqdo masuul xisbigoodda ka xidhan iyo jawaabta xukuumadda
Guddoomiyaha golaha Wakiiladda Somaliland, ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI C/raxmaan Maxamed C/laahi Cirro, ayaa sheegay in loo diiday inuu saldhiga dhexe ee Hargeysa ku booqdo sarkaal ka tirsan xisbigoodda oo xidhan.
Fanaanka Farxaan Xidig oo lagu xiray Hargeysa
Sagal Radio Services • News Report • July 3, 2016
Fanaanka caanka Farxaan Xidig ayaa ku xiran magaalada Hargeysa ee Somaliland, iyadoo xarigiisa ay ka soo baxayaan warar kala duwan.
Faah faahin ka soo baxaya weerar lagu qaaday Guriga Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland
Sagal Radio Services • News Report • June 20, 2016
Faah faahin ayaa ka soo baxaya weerar habeen hore lagu qaaday guri uu magaalada Hargeysa ka degenaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Waran-Cadde.
Ciidamada Booliska Somaliland oo Hargeysa ku qabtay rag looga shakisan yahay Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • May 17, 2016
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in howl galo ciidamada Booliska Somaliland ka sameeyeen xaafado dhowr ah lagu qabtay rag hubeysan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
SIILAANYO: Aniga Waxaa iga go’an in Doorasho Xalaal ah ay Dalka ka dhacdo 2017-ka (SAWIRO)
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Max'ed Siilaanyo, ayaa maanta ku dhawaaqay inay dib u billaaban tahay Diiwaan-gelintii codbixiyeyaashii ee mudadda bisha ah dib loo dhigay abaaraha awgeed.
Dad Mad-habta Shiicada ku faafinayay Somaliland oo lagu xukumay Hargeysa
Maxkamadda Hargeysa ayaa xukun isugu jira, xarig, ganaax iyo musaafuri waxay ku ridday saddex qof oo la sheegay inay Mad-habta Shiicada ku faafinayeen Somaliland.
Rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Hargeysa
Wiil 11 jir ah ayaa ku dhintay, halka afar kalena ku dhaawacmeen, kadib rabshad xalay ka dhacday magaalada Hargeysa, iyadoo ciidamada Booliska ay rasaas ku fureen dhalinyaro dhagax ku tuuray.
Wasiirkii Maaliyada Somaliland oo iska diiday xilkii loo magacaabay
Wasiirkii Maaliyadda Somaliland C/casiis Maxamed Samaale oo ka mid ahaa Wasiiradii uu isku shaandheynta ku sameeyay Madaxweyne Siilaanyo ayaa iska diiday xilkii loo magacaabay ee Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare.
Ciidamada RRU-da oo la wareegay Xarunta Golaha Wakiilada Somaliland una diiday Xildhibaanada qaar in ay galaan Xaruntaasi
Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ee Xarunta Maamulka Somaliland ayaa sheegaya in Ciidamo katirsan Maamulkaasi gaar ahaan kuwa loo yaqaan RRU-da ay saakay la wareegeen iskuna gadaameen xarunta Golaha Wakiilada Somaliland.
Soomaliland oo Xabsiga Dhigtay ilaa Afar Wariye oo ka Howlgala Hargeysa.
Ciidamada Maamulka Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay ilaa afar wariye ka howl gala qaar ka mid ah Telefishinada Soomaalida, kadib markii lagu eedeeyay inay tabiyeen warar been abuur ah.